ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် - ဝီကီပီးဒီးယား
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းရှိ တရားရုံးများတွင် အမြင့်ဆုံးတရားရုံးဖြစ်သည်။ ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်ကို ၂၀၀၈ ခုနှစ် ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်ကို တရားသူကြီးချုပ်အပါအဝင် တရားသူကြီး နည်းဆုံး ၇ ဦးမှ အများဆုံး ၁၁ ဦးနှင့်ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည်။ (လက်ရှိတွင် တရားသူကြီး ၉ ဦးသာရှိသည်။) ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတက အမည်စာရင်းတင်သွင်းပြီး ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် ၏ အတည်ပြုချက်ဖြင့် ခန့်အပ်သည်။ အဆောင်အယောင်ဥပဒေအရ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် သည် ဒုတိယသမ္မတ နှင့် တန်းတူ အဆောင်အယောင်များကို ခံစားခွင့်ရှိပြီး ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ် တရားသူကြီးများသည် ပြည်ထောင်စု ဒုတိယဝန်ကြီးနှင့်တန်းတူ အဆောင်အယောင်များကို ခံစားပိုင်ခွင့်ရှိသည်။
၇၀ နှစ် သက်ပြည့်အနားယူချိန်ထိ
၃၀ မတ်လ ၂၀၁၁ ခုနှစ်
ရန်ကုန်မြို့ရှိ ယခင် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် အဆောက်အအုံ
၄ လက်ရှိ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ဖွဲ့စည်းမှု
၅ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ တရားလွှတ်တော်များ
ဒေါက်တာဘဦး - ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် (၁၉၄၈ - ၁၉၅၂)
တရားရုံးအဆင့်ဆင့်ကို ၁၉၄၈ ပြည်ထောင်စုတရားစီရင်ရေးအက်ဥပဒေမှ တဆင့်တည်ထောင်ခဲ့သည်။ လွတ်လပ်သောမြန်မာနိုင်ငံ၏ ပထမဦးဆုံးတရားသူကြီးချုပ်သည် အင်္ဂလန်ပြည် ကိန်းဘရစ်ချ်ပညာတတ်ရှေ့နေ ဒေါက်တာဘဦး ဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းတွင်ပြည်ထောင်စုသမ္မတ မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဒုတိယမြောက် သမ္မတဖြစ်လာခဲ့သည်။ ဒေါက်တာဘဦး သည် ၁၉၄၈ ခုနှစ်မှ ၁၉၅၂ ခုနှစ်အထိတရားသူကြီးချုပ်အဖြစ်ထမ်းဆောင်ခဲ့သည်။
၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတော်၊ ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေအရ နိုင်ငံတော်၏ တရားစီရင်ရေးဆိုင်ရာရုံးများကို အောက်ပါအတိုင်း တည်ထောင် ထားရှိသည်-
ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် အယူခံမှုများအတွက် အမြင့်ဆုံး တရားရုံး ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် အယူခံမှုနှင့် ပြင်ဆင်မှု အာဏာများကို ကျင့်သုံးနိုင်သည်။ ထို့အပြင် မူလမူများကိုလည်း ကြားနာ စစ်ဆေး စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိပြီး အောက်ပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၌သာ မူလမှု စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာများ ရှိသည်-
ပြည်ထောင်စု နိုင်ငံတော်က ချုပ်ဆိုသော ပြည်ထောင် အချင်းချင်းဆိုင်ရာ စာချုပ်များနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ပေါ်ပေါက်လာသော ကိစ္စရပ်များ၊
ပြည်ထောင်စု အစိုးရနှင့်တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အစိုးရ တို့အကြား ဖြစ်ပွားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဿနာများမှအပ အခြား အငြင်းပွားမှုများ၊
တိုင်းဒေသကြီး အချင်းချင်း၊ ပြည်နယ် အချင်းချင်း၊ တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ် အချင်းချင်း၊ ပြည်ထောင်စု နယ်မြေနှင့် တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် အချင်းချင်းတို့အကြား ဖြစ်ပွားသည့် ဖွဲ့စည်းပုံ အ‌ခြေခံ ဥပဒေဆိုင်ရာ ပြဿနာများမှအပ အခြား အငြင်းပွားမှုများ၊
ပင်လယ်ဓားပြမှုများ၊ နိုင်ငံတကာ ပင်လယ်ပြင် သို့မဟုတ် ကောင်းကင်ယံ၌ ကျူးလွန်သော ပြစ်မှုများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ဥပဒေကို ချိုးဖောက်၍ မြေပြင် သို့မဟုတ် နိုင်ငံတကာ ပင်လယ်ပြင် သို့မဟုတ် ကောင်းကင်ယံ၌ ကျူးလွန်သော ပြစ်မှုများ၊
ဥပဒေတစ်ရပ်ရပ်အရ သတ်မှတ်ထားသော အခြားကိစ္စရပ်များ။
ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံ ဥပဒေ သို့မဟုတ် အခြား ဥပဒေပါ ပြဋ္ဌာန်းချက်ကို အထောက်အထားပြု၍ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၌ အောက်ပါ ကိစ္စရပ်များအတွက် စီရင်ပိုင်ခွင့် ရှိသည်-
ပြည်ထောင်စုတရားလွှတ်တော်ချုပ်က မူလမှု စီရင်ပိုင်ခွင့်ကို ကျင့်သုံး၍ ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်၊ ဒီကရီ သို့မဟုတ် အမိန့်အပေါ် အယူခံဝင်ခြင်း၊
တိုင်းဒေသကြီး သို့မဟုတ် ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော်မှ ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်၊ ဒီကရီ သို့မဟုတ် အမိန့်အပေါ် အယူခံဝင်ခြင်း၊
အခြားတရားရုံးက ဥပဒေနှင့်အညီ ချမှတ်ခဲ့သည့် စီရင်ချက်၊ ဒီကရီ သို့မဟုတ် အမိန့်အပေါ် အယူခံ ဝင်ခြင်း။ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်သည် တရားရုံးတစ်ရုံးက ချမှတ်သော စီရင်ချက် သို့မဟုတ် အမိန့်ကို ဥပဒေ နှင့်အညီ ပြင်ဆင်မှု စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာ၊ သေဒဏ်အမိန့်ကို အတည်ပြုမှုနှင့်သေဒဏ်အမိန့်ကို အယူခံမှုများအား စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာ၊ မိမိ၏ ဆုံးဖြတ်ချက်အရ လွှဲပြောင်းရယူသော အမှုနှင့်တရားရုံးတစ်ရုံးမှ အခြားတရားရုံး တစ်ရုံးသို့ အမှု လွဲှပြောင်းပေးမှုကိုလည်း စီရင်ပိုင်ခွင့် အာဏာရှိသည်။
ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၌ အောက်ပါ စာချွန်တော်အမိန့်များကို ထုတ်ဆင့်ပိုင်ခွင့် အာဏာ ရှိသည်-
လက်ရှိ ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ် ဖွဲ့စည်းမှုပြင်ဆင်
ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၌ ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် တဦး နှင့် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်တရားသူကြီး (၈) ဦးရှိသည်။
(ပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ်) ၂၀၁၁ မတ်လ ၃၀ ၂၀၂၆ ဦးသိန်းစိန် ဒုပြည်ထောင်စုတရားသူကြီးချုပ် B.A. (Law), LL.B (Rangoon University)
၂ ဦးသာဌေး ၂၀၁၁ မတ်လ ၃၀ ၂၀၂၈ ဦးသိန်းစိန် ပြည်ထောင်စု ရွေးကောက်ပွဲ ကော်မရှင် အဖွဲ့ဝင် LL.B (Rangoon University)
၃ ဦးမြင့်အောင် ၂၀၁၁ မတ်လ ၃၀ ၂၀၂၂ ဦးသိန်းစိန် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတရားလွှတ်တော် တရားသူကြီး B.A (Psychology), Higher Grade Pleadership Certificate (1981)
၄ ဦးအောင်ဇော်သိန်း ၂၀၁၁ မတ်လ ၃၀ ၂၀၂၇ ဦးသိန်းစိန် လက်ထောက် စစ်ဥပဒေချုပ် B.A. (Law), LL.B (Rangoon University)
၅ ဦးမြဟန် ၂၀၁၇ ဇွန်လ ၁၄ ၂၀၂၃ ဦးထင်ကျော် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ B.A. (Law), LL.B (Rangoon University), Dip in Business Management, Dip in Maritime Law
၆ ဦးမျိုးတင့် ၂၀၁၇ ဇွန်လ ၁၄ ၂၀၂၆ ဦးထင်ကျော် ပြည်ထောင်စု တရားလွှတ်တော်ချုပ်၏ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် LL.B (Rangoon University)
၇ ဦးစိုးနိုင် ၂၀၁၇ ဇွန်လ ၁၄ ၂၀၂၅ ဦးထင်ကျော် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးဥပဒေအရာရှိ B.A. (Law), LL.B (Rangoon University)
၈ ဦးခင်မောင်ကြည် ၂၀၁၇ ဇွန်လ ၁၄ ၂၀၂၈ ဦးထင်ကျော် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ LL.B (Mandalay Arts and Science University)
၉ ဦးမျိုးဝင်း ၂၀၁၈ နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ၂၀၂၈ ဦးဝင်းမြင့် တရားလွှတ်တော်ရှေ့နေ LL.B (Rangoon University)
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ တရားလွှတ်တော်များပြင်ဆင်
အကျယ်တဝင့် ဖော်ပြထားသောဆောင်းပါး - ပြည်နယ်နှင့် တိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော်များ
တိုင်းဒေသကြီးနှင့် ပြည်နယ်များရှိ တရားလွှတ်တော် (၁၄) ရပ်မှာ အောက်ပါအတိုင်း ဖြစ်သည်
ကချင်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော် - ကချင်ပြည်နယ် မြစ်ကြီးနားမြို့
ကယားပြည် တရားလွှတ်တော် - ကယားပြည်နယ် လွိုင်ကော်မြို့
ကရင်ပြည်နယ် တရားလွှတ်တော် - ကရင်ပြည်နယ် ဘားအံမြို့
ချင်းပြည်နယ် တရားလွှတ်တော် - ချင်းပြည်နယ် ဟားခါးမြို့
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး တရားလွှတ်တော် - စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး မုံရွာမြို့
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ပြည်ထောင်စု_တရားလွှတ်တော်ချုပ်&oldid=684565" မှ ရယူရန်
၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၆ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၄:၂၁ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။